▷ Laptọọpụ kachasị mma nwere SSD nke 2022, nke ị ga-azụta?
N'oge a, mgbe anyị malitere ịchọ laptọọpụ ọhụrụ, nhọrọ dị na ya dị ukwuu. Enwere ọtụtụ laptọọpụ dị iche iche na ọtụtụ ụdị laptọọpụ nke ị ga-ahọrọ. Na mgbakwunye, anyị ga-eburu n'uche ọtụtụ akụkụ tupu ịhọrọ otu ụdị. Ihe doro anya bụ na ọ bụrụ na ịchọrọ ọsọ mgbe ị na-amalite kọmputa ma ọ bụ imeghe ngwa, ị kwesịrị ịzọ nzọ laptọọpụ nwere SSD.
Laptọọpụ nwere SSD aghọwo ihe a na-ahụkarị n'ahịa. Nhọrọ ahụ etoola nke ukwuu, dị ka àgwà ya dị. Maka nke a, n'okpuru anyị ga-edobe ọtụtụ ụdị laptọọpụ na SSD na ntụnyere. Ka i wee hụ nke ọma ihe anyị nọ ugbu a na ahịa.
Ntụnyere nke nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na ị na-eche echiche zụta laptọọpụ na SSD.
1 Laptọọpụ SSD kacha ewu ewu
2 Laptọọpụ kacha mma nwere SSD
3 Uru dị na ịzụrụ laptọọpụ na SSD
3.2 Nchekwa batrị
3.4 Ịdabere na iguzogide
3.5 Gbachi nkịtị
3.6 Ibu ibu
4 Kedu ikike ịhọrọ laptọọpụ na SSD?
5 Laptọọpụ nwere SSD kpochapụwo ma ọ bụ M.2 SSD?
6 Ego ole ka laptọọpụ SSD dị ọnụ ala na-eri?
7 Otu esi etinye SSD na laptọọpụ
Laptọọpụ SSD kacha ewu ewu
Anyị emeela ka a tụnyere nke laptọọpụ na SSD iji nyere gị aka ịhọrọ. Nke mbụ, anyị ga-ahapụ gị na tebụl nke na-egosi njirimara bụ isi nke ụdị nke ọ bụla. Ka ị nwee ike nweta echiche doro anya nke ọ bụla n'ime ha.
Mgbe tebụl ahụ gasịrị, anyị na-ahapụ gị nyocha miri emi nke ọ bụla n'ime laptọọpụ anọ ndị a.
HP 240 G8 - Kọmputa ...
Laptọọpụ kacha mma nwere SSD
Ozugbo anyị ahụlarị nkọwa nke mbụ nke ụdị nke ọ bụla, anyị na-aga n'ihu na nyocha miri emi nke ha niile. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike nweta ozi ndị ọzọ gbasara ọrụ ya na akụkụ kachasị mkpa. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-elele laptops nwere SSD ugbu a, ọ nwere ike inye aka ịhọrọ nke dabara nke ọma ihe ị na-achọ.
Anyị na-amalite na ihe nlereanya a site na Acer, akara edobere n'ahịa na nke laptọọpụ ya na-adị mma mgbe niile. Yabụ na ọ bụ ụlọ ọrụ tụkwasịrị obi maka ndị na-azụ ahịa. Laptọọpụ a nwere a 15,6 anụ ọhịa ahụ. Nnukwu nha iji nwee ike ịrụ ọrụ na nke ahụ na-enyekwa anyị ohere iri ọdịnaya multimedia n'ụzọ dị mfe. Ihuenyo nwere mkpebi HD zuru ezu. Ya mere, anyị ga-enwe ọmarịcha àgwà oyiyi mgbe niile.
Acer Gbasara 5 A515-55 -...
N'ime ya a 8GB RAM na 512GB SSD ikike. Ngwakọta dị mma nke ga-enye anyị ahụmịhe onye ọrụ mara mma. Ọzọkwa, ọ dị mma na ọ nwere RAM nke 8 GB. Ebe ọ bụ na ndị ọzọ yiri ụdị nzọ n'ihi na obere, na ọ bụ ihe na ogologo okwu i nwere ike ejedebe na-achọpụta. Ọzọkwa, ekele maka ojiji nke SSD, laptọọpụ na-agba ọsọ ngwa ngwa ma na-eri obere batrị. N'ezie, batrị ga-adịru anyị ụbọchị niile, dị ka ika n'onwe ya. Ya mere, anyị nwere ike iji laptọọpụ n'èzí na-enweghị nchegbu banyere chaja ya kwa mgbe.
Ụlọ ọrụ ahụ nwekwara nchegbu maka nhazi nke laptọọpụ. Ebe ọ bụ na anyị na-eche ihu ihe nlereanya na-apụta ìhè maka imewe mara mma. Ejiri ihe dị mma mee ya, n'ihi ya, ọ dịghị ihe ọ bụla nke plastik adịghị mma. Ihe niile na-akpachapụ anya. Ekwesịrị ikwupụta na ọ bụ a obere ibu arọ, ịdị arọ karịa kilogram 1,6. Ihe na-eme ka ọ dị mfe iji ya na anyị mgbe niile na-arụ ọrụ ma ọ bụ ebe ọmụmụ ihe. Anyị na-eche ihu laptọọpụ na-arụ ọrụ nke ọma, ngwa ngwa, dị mfe ma dị mma maka ọrụ ma ọ bụ ọmụmụ ihe.
Nke abuo, anyị na-ahụ ihe nlereanya a site na ika mara maka ya egwuregwu laptọọpụ. Ihe nlereanya a adịghị iche. Ebe ọ bụ nnukwu nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ laptọọpụ dị ike nke eji egwu egwu. Na mgbakwunye, ọ pụtara ozugbo maka imewe ya na ọkụ na-acha uhie uhie nke keyboard ya. Ọ nwere ihuenyo 15,6-anụ ọhịa. Nha dị mma iji kpọọ ma ọ bụ rie ọdịnaya multimedia. Na mgbakwunye, ọ nwere mkpebi HD zuru oke, ka anyị wee nwee ọmarịcha ihe onyonyo yana ezigbo ọgwụgwọ agba.
MSI GF65 dị mkpa ...
N'ime laptọọpụ ahụ nwere 16 GB Ram na ngwakọta na-adọrọ mmasị. Dị ka anyị nwere 1 TB SSD ike mbanye. Ngwakọta dị mma nke na-enye laptọọpụ ahụ ọtụtụ ikike nchekwa, kamakwa ike. Ebe ọ bụ na ekele ya anyị na-enweta ihe kacha mma nke SSDs na draịva siri ike. Yabụ na ị ga-enwe ike nweta ọtụtụ ihe n'ụdị a. Tụkwasị na nke a, nchikota a na-eme ka ọ bụrụ ezigbo ihe nlereanya iji gwuo egwu. Ebe ọ bụ na ika ahụ achọghị ịkwanye ike, arụmọrụ na ikike.
Ọ bụ ihe nlereanya ka ukwuu karịa nke mbụ, ma dịkwa arọ. Ihe nlereanya a dị kilogram 4,2. Ọ bụghịkwa nke kachasị arọ. Mana ọ dị mkpa iburu nke a n'uche mgbe ị na-ebufe ya. A na-eji ihe ndị dị mma mee ihe ahụ. Ya mere, ọ bụ laptọọpụ e mere ka ọ nọrọ ogologo oge. Ọ dịkwa mkpa ikwu na ọkụ ahụigodo bụ naanị uhie. Ọ gaghị ekwe omume iji agba ndị ọzọ. Laptọọpụ dị mma maka egwuregwu. Ebe ọ bụ na ọ dị ike, ngwa ngwa, na-enye ọrụ dị mma ma na-eguzogide ọgwụ.
N'ebe nke atọ ihe nlereanya a sitere na HP na-echere anyị, akara kachasị ewu ewu na ahịa laptọọpụ. Dị ka ọ dị na mbụ na ika ahụ, ihe nlereanya a bụ nkwa nke ịdị mma na arụmọrụ dị mma. Yabụ na ọ bụ ịzụrụ enweghị nchekwa ma mara na ọ gaghị enye gị nsogbu ọrụ. Ihe nlereanya a nwere ihuenyo 15,6 inch. Nnukwu nha iji rụọ ọrụ na iri ọdịnaya multimedia. Kedu ihe ọzọ, nwere mkpebi HD zuru ezu. Ihe na-ekwe nkwa ịdị mma oyiyi dị ukwuu na karịa agba niile na-anọchi anya nke ọma (ha anaghị adị oke oke ma ọ bụ dị anya site na eziokwu).
HP Pavilion - 15-cs3011ns ...
N'ime anyị na-ahụ 8 GB Ram na ngwakọta nke diski ike na SSD. A ike mbanye nke 1 TB SSD ike. Ekele maka nchikota a, akwụkwọ ndetu na-enye ọtụtụ ikike nchekwa, nguzogide, ntụkwasị obi na ọsọ usoro dị elu. Ya mere ngwa ndị ahụ ga-ebu ngwa ngwa ma ị ga-enwe ahụmịhe onye ọrụ dị nro. Ya mere, onye ọrụ bụ onye na-erite uru na nchikota a. Ị ga-ahụkwa obere batrị dị ala karịa ka ọ dị n'ihi ọnụnọ nke SSD.
Nhazi nke akwụkwọ ndetu mara mma nke ukwuu ma jiri ihe dị mma mee ya. Ya mere, ọ bụkwa ihe nlereanya na-eguzogide nke ọma ma ọ bụrụ na ị kụrụ ya na mberede. N'ihe banyere ịdị arọ, ọ dị kilogram 2,7. Ọ bụghị ihe nlereanya kachasị mfe, ma ọ bụghị ihe mgbochi ma a bịa n'iwere ya. Ọ bụrụ na ị na-achọ laptọọpụ a pụrụ ịdabere na ya nke na-enye arụmọrụ dị mma, ngwa ngwa na ọ ga-adịru ọtụtụ afọ, ọ bụ nhọrọ dị mma. Buru n'uche.
Dị ka isi ihe na ihu ọma ya, ọ bụ a laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ, yabụ ị ga-echekwa ego site na ịghara ịkwụ ụgwọ maka ikikere Windows.
Anyị na-emechi ndepụta ahụ na ụdị Lenovo a, akara nke ewu ewu ya na-aga n'ihu. Ebe ọ bụ na ha jisiri ike nweta akara n'ahịa site n'inye kọmputa Laptọọpụ nwere ọnụ ahịa dị ukwuu maka ego. Ngwakọta dị mma nke na-eme ka ihe sie ike maka ndị asọmpi gị. Oge a, akwụkwọ ndetu nwere a 15,6 anụ ọhịa ahụ. Ọ bụ nha dị mma nke na-enye anyị ohere iji kọmpụta rụọ ọrụ nke ọma, kamakwa ka anyị nwee ike iri ọdịnaya multimedia. N'ihe gbasara mkpebi, ọ nwere mkpebi HD zuru ezu. Ya mere, ọ bụ àgwà oyiyi dị mma na ọgwụgwọ dị mma nke agba mgbe niile.
Este Lenovo laptọọpụ zọọkwa na ngwakọta nke diski ike na SSD. N'okwu a, ọ nwere diski ike 1 TB, yana ikike 512 GB SSD. Ọ bụ ngwakọta na-enyere kọmputa aka inye anyị ahụmịhe onye ọrụ ka mma. Ebe ọ bụ na ọ na-ejikọta akụkụ dị mma nke usoro abụọ ahụ. Yabụ na ọ dị ntakịrị ngwa ngwa karịa laptọọpụ nke nwere naanị draịvụ ike, ọ na-eme obere mkpọtụ, ọ siri ike yana anyị nwekwara ọtụtụ ohere nchekwa. Ya mere, onye ọrụ na-emeri.
Nhazi nke laptọọpụ bụ ihe kpochapụwo, ọ bụ ezie na n'ihe gbasara ihe, na-enweghị àgwà adịghị mma, a na-ahụta na ha dịtụ njọ karịa nke ụdị ndị ọzọ. Ọ bụghị n'ihi nke ahụ ọ bụ laptọọpụ ka njọ, mana ọ nwere ike ịdị ntakịrị karịa ịdaba ma ọ bụ ihe mgbagwoju anya. A na-amụnyekwa ahụigodo nke laptọọpụ. Ọ bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịrụ ọrụ na igwu egwu n'otu kọmputa ahụ, ebe ọ bụ na ọ nwere ikike dị mkpa iji mee ya. Ya mere, na-enweghị itinyekwu ego, ị nwere ike ime ihe niile n'otu ebe. N'ihe banyere ịdị arọ, ọ bụ nke kacha arọ na ntụnyere, na-atụ kilogram 2,3. Ọ bụghị na ọ dị oke oke, ma ọ nwere ike ime ka ibu ya ghara iru ala mgbe ụfọdụ.
Uru dị na ịzụrụ laptọọpụ na SSD
Iji SSD kama draịvụ ike nwere ike ịba uru maka laptọọpụ gị. N'ihi nke a, ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ ịzụta ihe nlereanya nwere otu. Ọ bụ ezie na, a ghaghị ikwu na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa amaghị uru ọ na-enye anyị.
Ya mere, anyị na-ahapụ gị n'okpuru na ụfọdụ n'ime uru ndị bụ isi na ịnwe laptọọpụ na SSD na-enye anyị. Ozi nwere ike inyere gị aka mgbe ị na-eme mkpebi ịzụrụ.
Ọ bụ uru bụ isi nke meworo ka draịva steeti ndị a siri ike (SSD) pụta ìhè karịa draịvụ ike ọdịnala. Mgbe ị na-amalite sistemụ arụmọrụ, SSD ọ na-eme ya n'ọtụtụ ọnọdụ n'ihe na-erughị ọkara oge nke diski ike. Ọzọkwa, ọsọ ọgụgụ na ide na-adịkarị elu nke ọma.
Ya mere SSD na-enyere anyị aka ọrụ nke kọmputa anyị na-adị ngwa ngwa na mmiri mmiri n'ozuzu. N'ụzọ ezi uche dị na ya, a ga-enwe ọdịiche dị n'etiti ụdị. Mana ha na-agba ọsọ karịa draịvụ ike ọdịnala ka ọnụego mbufe ọgụgụ na ide dị elu karịa HDD ọdịnala.
E wezụga ịdị ngwa karịa draịvụ ike ọdịnala, laptọọpụ ndị nwere SSD na-enwekarị oriri batrị dị ala. Ya mere, ndị ọrụ ga-ahụ ka batrị laptọọpụ ha na-adịru ogologo oge. Ihe niile ndị ọrụ chọrọ ka ha nwee. Ọ ga-ekwe omume naanị site na iji SSD. Nke a na-azọpụta ga-ekwe omume ekele na-anọghị nke ije.
Akụkụ ọzọ na ọ dị mkpa mgbe niile iji mesie ike nke SSD bụ obere mmezi Kedu ihe ị chọrọ. Onye ọrụ agaghị eme ihe ọ bụla. N'adịghị ka draịva siri ike, nke a ga-emebisị oge ọ bụla, ọ bụrụ na ị nwere laptọọpụ nwere SSD, ị nwere ike ichefu usoro a. Nke abụghị naanị mgbagwoju anya, ma na-ewe oge. Daalụ, ekele maka ụdị SSD ịkwesighi ịgafe ya.
Ịdabere na iguzogide
Ndị a bụ draịva gbadoro ụkwụ na ebe nchekwa flash na enweghị akụkụ na-akpụ akpụ. Maka ndị ahụbụ ọtụtụ ihe na-eguzogide ọgwụ na ntụkwasị obi karịa kpochapụwo ike mbanye. N'ezie, nke a na-ahụkarị bụ na ọ bụrụ na a daa laptọọpụ ma ọ bụ kụọ ebe ọ bụla, ọ dịghị etinye ihe ize ndụ ọ bụla na data echekwara na draịva ahụ. A ga-enwe naanị ma ọ bụrụ na unit bụ onye na-enweta ihe ọkụkụ ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ nweghị ihe ga-echegbu onwe gị.
Nke a bụ ihe a na-ahụ anya mgbe ị na-enwe ike iji draịva siri ike nwalee laptọọpụ na nke ọzọ na SSD. Ọ bụ mgbe ahụ ka ị na-ahụ ihe dị iche. N'okwu a, ị na-ege ya ntị. Dị ka nkeji ndị a pụtara maka ịnọ jụụ. Ihe mere ha ji gbachi nkịtị bụ na ọ dịghị mmegharị ahụ. Ya mere ha anaghị eme mkpọtụ ọ bụla. Ọ bụrụ na ị nwere laptọọpụ nwere draịva siri ike ma gbanwee na draịva ndị a, ị ga-ahụ ihe dị iche.
Otu SSD pụtara ìhè nke ukwuu. Ọtụtụ ihe karịrị draịvụ ike ọdịnala. Nke a bụ ihe nwere mmetụta dị ukwuu na laptọọpụ. Ebe ọ bụ na mgbakwunye na ịnwe obere oghere n'ime ya, ọ na-eme ka ịdị arọ nke kọmpụta dị ntakịrị. Ihe dị mma, ebe ọ bụ onye na-azụ ahịa na-emeri. N'ihi na kọmputa na-arụ ọrụ nke ọma, ma ọ dị mfe karị.
Kedu ikike ịhọrọ laptọọpụ na SSD?
Ọtụtụ mgbe obi abụọ na-ebilite maka ikike anyị chọrọ na draịvụ ike maka laptọọpụ. Dị ka ọ na-emekarị, ihe niile dabere na ojiji anyị ga-enye ya.
Ọ bụrụ na laptọọpụ nwere SSD nke ị ga-azụta ga-abụ naanị kọmputa gị, mgbe ahụ ị ga-achọ ikike zuru oke iji chekwaa foto gị niile. N'ebe a, anyị nwere ike ịhọrọ ọtụtụ nhọrọ:
Laptọọpụ na SSD: N'okwu a, gbalịa ịchọta nke nwere ma ọ dịkarịa ala 512GB ebe ọ bụ na ọbụna 256GB nwere ike ịdaba na njedebe dị mfe ozugbo ị na-echekwa foto, egwu ma ọ bụ ihe nkiri na-adịghị mma na HD.
Laptọọpụ nwere SSD + HDD: Ha na-abụkarị nhọrọ dị mma maka ndị chọrọ nnukwu ikike. N'otu aka ahụ, anyị nwere 128GB ma ọ bụ 256GB SSD iji wụnye sistemụ arụmọrụ na ngwa, mana anyị nwekwara HDD dị elu nke ọdịnala (na-abụkarị 1TB) iji chekwaa faịlụ.
Ọ bụrụ na kọmputa ahụ ga-abụ kọmpụta nke abụọ nke ị ga-eji naanị maka ọrụ ndị bụ isi na oge ụfọdụ (njem), ọ ga-abụ na na 128GB ị ga-enwe ike ịrụ ọrụ nke ọma, n'agbanyeghị. Anyị na-akwadosi ike ka ị ghara ịzụta nke na-erughị 256GB n'ihi na ị maghị ma anyị ga-achọkwu ebe nchekwa.
Ọ bụrụ na imehie ihe mgbe ị na-azụta laptọọpụ gị wee họrọ 128GB nke draịvụ ike ya enweghị ike ịgbanwe (MacBook nwere SSD rere ere, dịka ọmụmaatụ), ị nwere ike ịdabere na draịvụ ike mpụga mgbe niile ka enwekwu ikike.
Laptọọpụ nwere SSD kpochapụwo ma ọ bụ M.2 SSD?
Acer Gbasara 5 ...
Ugbu a anyị maara na ihe anyị chọrọ bụ laptọọpụ nwere SSD, anyị ga-ehichapụ ajụjụ ọzọ: anyị na-azụta nke nwere SATA SSD ma ọ bụ na-eji a. M.2 SSD? Iji mara ihe na-amasị anyị, anyị ga-ebu ụzọ mara àgwà nke nke ọ bụla nwere. Ndị kasị ochie na ndị kasị ochie bụ SATA, nke bụ diski 2.5-inch ma kwekọọ na kọmputa ndị ọzọ, mana teknụzụ ha na-ejedebe, ebe ọ bụ na e mere ha maka iji na diski HDD na-eji nwayọọ nwayọọ.
diski ndị ahụ SSD M2 ha bụ ihe ọgbara ọhụrụ, nke pụtakwara na ha na-agba ọsọ karịa ụmụnne ha ndị tọrọ (ma ọ bụ ndị tọrọ). Isi nsogbu bụ na M.2 na-adaba naanị na kọmputa ọgbara ọhụrụ, mana nsogbu ekwesịghị ịdị otú ahụ ma ọ bụrụ na ihe anyị ga-azụta bụ laptọọpụ nwere ihe niile mejupụtara ya.
N'ime uru dị n'iji M2 SSD anyị nwere nke ahụ jikọọ ozugbo na motherboardYa mere, ihe niile na-adaba nke ọma na enweghị eriri ọzọ iji banye n'ụzọ ma ọ bụ buru ohere karị. Nke a pụtakwara na ọ na-esiri ha ike ịgbaji: obere akụkụ, obere ohere ọdịda.
N'ịmara ihe niile dị n'elu, ihe ahụ doro anya: ọ bụrụ na anyị ga-azụta laptọọpụ ejikọtalarị, ọ bara uru ịzụta nke nwere M2 SSD, ebe ọ bụ na ha bụ. diski ngwa ngwa nke na-eweta obere nsogbu.
Ego ole ka laptọọpụ SSD dị ọnụ ala na-eri?
Laptọọpụ dị ọnụ ala nke gụnyere SSD bụ Primux Ioxbook na dị maka ihe dị ka € 160. Mana ihe a ga-eburu n'uche bụ na ebe kachasị ike ya bụ diski SSD, nke na-enye anyị nnukwu ịgụ na ide ọsọ ọsọ. N'ebe ndị ọzọ, ihe anyị ga-enweta maka ọnụahịa ahụ bụ laptọọpụ nwere uche na-adọpụ uche, yana ihe dịka 2GB nke RAM ga-ebugharị Windows 10 nke ọ na-eji dị ka sistemụ arụmọrụ ya nke ọma. The processor bụghị otu n'ime ndị kasị ike na ahịa, n'ihi ya, ọ bụ kọmputa maka ndị nwere ndidi na irighiri akwara nke ígwè. Ihe ọzọ dị mma ya bụ na ọ bụ kọmpụta ultralight nwere ihuenyo 14 ″, nke dị ukwuu ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ihe ndị dị n'ime ya yiri nke etinyere na laptọọpụ 10.1 ″.
Otu esi etinye SSD na laptọọpụ
Ihe na-abawanye na ndị ọrụ na-eme bụ tinye SSD na laptọọpụ gị. N'ụzọ dị otú a, ha nwere ike ịnụ ụtọ uru nke nkeji ndị a na-enye ha. Ọ bụ ihe enwere ike ịme ma ọ bụrụ na laptọọpụ gị na-enye ya ohere. Iji mee nke a, a ghaghị ime usoro dum, nke a na-echekwakarị maka ndị ọrụ nwere ihe ọmụma karịa.
Kacha nkịtị bụ dochie HDD ike mbanye na SSD. Maka nke ahụ, ịkwesịrị ịzụta draịva SSD (nke ịchọrọ dabere na mkpa gị na mmefu ego gị, ebe a ị nwere ike ịhụ ihe kacha mma enye) na igbe SATA-USB. Otu nkọwa dị mkpa iburu n'uche bụ na unit ị zụrụ nwere ikike zuru ezu iji wụnye sistemụ arụmọrụ yana faịlụ ndị anyị nwere na draịvụ ike.
Ihe mbụ anyị kwesịrị ime bụ ịwụnye sistemụ arụmọrụ na SSD. Iji mee nke a, anyị na-ejikọta unit a na SATA-USB igbe. Anyị na-ejikọta igbe ahụ na kọmputa site na iji eriri USB ma na-eme usoro cloning. Ọ bụ usoro dị mfe, nke nwere nghọta na anyị nwere ngwanrọ n'efu maka ya. Yabụ na anyị agaghị enwe nsogbu na akụkụ a. Otu n'ime mmemme efu ị nwere ike ibudata bụ AOMEI Backupper.
Ozugbo ihe niile na-cloned, anyị dị njikere ime mgbanwe anụ ahụ. Yabụ na anyị ga-aga wepụ draịvụ ike wee tinye SSD n'ọnọdụ ya (n'ime igbe SATA). Ụfọdụ kọmputa na-enye anyị ohere ịnweta draịvụ ike ozugbo site na mkpuchi. Ndị ọzọ na-enye ohere ịnweta akụrụngwa niile site na mkpuchi ala. Dabere na ihe nlereanya gị, naanị ị ga-emepe otu mkpuchi ma ọ bụ mkpuchi ala niile.
Ya mere, anyị ga-ewepụ screwdriver ma mepee mkpuchi. Ya mere, ị ga-enwe ndidi nke ukwuu, n'ihi na ọ nwere ike ịbụ usoro ngwa ngwa (ọ bụ ezie na ọ dị nnọọ mfe). Anyị ga-achọta draịvụ ike wee gaba n'ihu wepụ ya. Anyị agaghị enwe nsogbu ime nke a. Ọzọ anyị na-ewebata SSD n'otu ebe ebe draịvụ ike dị. Ihe dị mkpa bụ ijikọ ya nke ọma na ọdụ SATA. Site n'ime nke a, anyị na-etinye ihe mkpuchi ahụ ma tụgharịa ihe niile.
Mgbe ịmechara nke a, naanị ị ga-eji SSD malite laptọọpụ ọhụrụ gị. Site na mmalite ị ga-ahụ ihe dị iche iche pụtara ìhè n'ihe gbasara ọrụ na arụmọrụ.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Tipo » Laptọọpụ nwere SSD